Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : /bins/ohabolana/foana.mg.aj
Proverbs : foana
Proverb 288 Ambiaty niakaram-bitsika : hondrahondrany foana , fa ny aty efa lany . [Veyrières 1913 #2419]
Ambiaty niakaram-bitsika : hondrahondrany foana , fa ny tenany be efa haroka . [Veyrières 1913 #2419, Cousins 1871 #124]
Ambiaty niakaram-bitsika : hondrahondrany foana ny raviny, fa ny tenany be efa haroka. [Houlder 1895]
Ambiaty noladinim-bitsika , ka hondrahondrany foana fa ny tenany be efa haroka . [Rinara 1974 #19]
Proverb 653 Ao ny be fanahy maty foana , ao kosa ny kely fanahy sitrak' olona . [Rinara 1974 #331]
Ao ny be fanahy maty foana; ao ny kely fanahy sitrak’ olona ; ao ny tsy tiana , fa manana ; ao ny hala, fa malahelo. [Cousins 1871 #270]
Proverb 915 Aza malaina fa ny mosary indray maraina aza tsy efa fotsiny. [Rinara 1974 #472]
Ny mosary indray maraina aza tsy efa foana . [Rinara 1974 #3155]
Proverb 1098 Aza manao ohatra an' Ikotokely mandihy ambony zezika : faly foana mihaino ny fidobony , fa tsy mihevitra ny farasisa hanaikitra ny tongotra . [Veyrières 1913]
Proverb 1244 Aza mandeha foana raha tsy ny zana- dRanona. [Veyrières 1913 #29]
Proverb 1580 Bala very foana toy ny bala natifi-takatra . [Veyrières 1913 #5894, Houlder 1895]
Proverb 1612 Batain-tsy zaka fa afindra mora foana toa lalana . [Rinara 1974]
Proverb 1748 Borerarera foana toy ny lolo an-tany. [Veyrières 1913 #2488, Rinara 1974 #956, Cousins 1871 #825]
Proverb 2222 Hadino akaiky tahaka ny kitapo foana . [Rinara 1974 #1232]
Proverb 2298 Harem-bery foana toy ny menaka ahoso-bato . [Rinara 1974 #1277]
Harem-bery foana , toy ny menaka ahoso--Bazimba . [Houlder 1895 #62, Veyrières 1913]
Proverb 2421 Hitsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha. [Rinara 1974 #1350, Rajemisa 1985]
Hitsikitsika tsy mandihy foana , fa ao zavatra. [Houlder 1895 #981, Veyrières 1913 #637]
Proverb 2678 Izay mandany foana ny volany dia ho sendra ny ora mampanenina . [Veyrières 1913 #2372]
Proverb 2872 Keliray no ho tezitra , ka ny masony ihany no adiridiriny . [Veyrières 1913]
Keliray no ho tezitra : ny maso no adiridiry . [Cousins 1871 #1256]
Keliray no tezitra ka ny maso foana no adiridiry . [Rinara 1974 #1611]
Kely ray no tezitra , ka ny maso no adiridiry . [Houlder 1895]
Keliray tezitra , ka ny masony ihany no adiridiriny . [Veyrières 1913]
Proverb 3062 Lany foana hoatry ny volan' Inambina . [Veyrières 1913 #2374]
Lany foana, ohatra ny volany Nambina . [Cousins 1871]
Lany foana tahaka ny volan' i Nambina . [Rinara 1974 #1735]
Lany maina toy ny koban' Inambina . [Veyrières 1913 #2379]
Proverb 3141 Lehibe foana, toa amiana. [Cousins 1871 #1352]
Lehibe foana toa amiana , fa raha iankinana mahaboka. [Rinara 1974 #1770]
Lehibe foana toy ny amiana . [Veyrières 1913 #1639, Houlder 1895]
Lehibe tsy azo iankinana ohatra ny amiana . [Rinara 1974]
Lehibe tsy azo iankinana tahaky ny amiana . [Veyrières 1913]
Lehibe tsy azo ifampikasohana ohatra ny amiana . [Rinara 1974]
Proverb 3142 Lehibe foana tsy hendry . [Veyrières 1913 #2083]
Proverb 3344 Maka afo amin' ny maty , ka hariva foana eo. [Rinara 1974 #1905]
Proverb 3397 Mamantan-tany foana toy ny havandra tonga ririnina . [Houlder 1895 #975, Veyrières 1913 #3927]
Mitsapa (mamantan- )tany foana tahaka ny havandra ririnina . [Rinara 1974 #2502]
Namantan-tany foana tahaka ny havandra ririnina . [Rinara 1974 #2728]
Proverb 3523 Manantena tsy misy no sarotra , fa raha mamoy mora foana . [Veyrières 1913 #5856]
Ny manantena tsy misy no sarotra , fa ny mamoy mora foana. [Cousins 1871 #2318, Nicol 1935 #272]
Proverb 3944 Maty an-dazony hoatry ny valala nosamborim-boka . [Veyrières 1913 #2009]
Proverb 3949 Maty foana , hoatry ny mamelon-jaza boka : miandry izay hahalehibiazany , kanjo nilaozany nanala rantsana . [Veyrières 1913]
Proverb 4118 Midonanaka foana , toa an' ilay nanjono an-tatatra : tsy toho nandray jono , tsy amalona nandray azy. [Houlder 1895 #972, Veyrières 1913 #5917]
Proverb 4128 Mietaketaka foana ny aketa , mirisarisa foana ny adrisa , fa tsy enina anay mitratraingo . [Rajemisa 1985]
Malagasy interpretation Enti-milaza fa tsy ny fisehoana ety ivelany akory no azo ilazana olona fa hahomby. [Rajemisa 1985]
Proverb 4165 Mihaotraotra foana . [Veyrières 1913 #6454]
French translation Se gratter comme un homme timide et confus. [Veyrières 1913 #6454]
French interpretation Geste ordinaire de confusion. [Veyrières 1913 #6454]
Proverb 4197 Mihorakoraka foana ny sahona , fa ny tsiboboka ihany tompon' ny rano ; fa raha ritra ny rano , mitsipika ny sahona , fa ny tsiboboka dia amin' ny rano ritra . [Veyrières 1913 #4050]
Proverb 4214 Mikitapotapoko foana hianao ! [Veyrières 1913 #2307]
French translation Tu répètes toujours : ma bourse ! ma bourse ! [Veyrières 1913]
French interpretation Se disait aux avares et aux gens avides de s' enrichir. [Veyrières 1913 #2307]
Proverb 4223 Mikotrana foana ny fandisa sy ny sahafa , fa ny vary ihany no ho toro. [Cousins 1871]
Mikotrana foana ny sahafa sy ny fanoto , fa ny vary ihany no toro. [Rinara 1974 #2338]
Proverb 4277 Mipasoka ny efa malama ka ny sandry foana no vizaka . [Rinara 1974 #2366]
Proverb 4289 Mirediredy foana toy ny andriandahy lany harena . [Veyrières 1913 #475, Cousins 1871 #1811]
Mirediredy toy ny andrian-dany harena . [Houlder 1895 #780]
Proverb 4295 Miriorio foana hoatry ny valala hanatody . [Veyrières 1913 #2038]
Proverb 4296 Miriorio foana ny angidina fa any anaty rano ihany no iafarany . [Rajemisa 1985]
Miriorio foana ny angidina , fa any an-kady ihany ny iafarana . [Cousins 1871]
Miriorio foana ny angidina , fa any an-kady ihany no farany . [Houlder 1895 #857]
Miriorio foana ny angidina , fa any an-kady ihany no hiafarana . [Nicol 1935 #220]
Miriorio foana ny angidina fa any an-kady ihany no hiafarany . [Rinara 1974 #154]
Miriorio foana ny angidina , fa any an-kady ihany no iafarana . [Veyrières 1913 #4016]
Mivezivezy hoatry ny rano miriorio hoatry ny angidina . [Veyrières 1913 #3043]
Mivezivezy ohatra ny rano; miriorio ohatra ny angidina . [Houlder 1895]
Mivezivezy toa rano , miriorio toa angidina . [Rinara 1974 #2521]
Proverb 4303 Misakaiza amim--Bazimba malahelo; ka ny akoholahy lany, ny fitahiana tsy misy. [Houlder 1895]
Proverb 4427 Mitonanaka foana tahaka an--dRafotsibe voadakan' osy . [Veyrières 1913 #1887, Cousins 1871 #1881]
Mitonanaka foana toa an--dRafotsibe voadakan' osy . [Rinara 1974 #2472]
Proverb 4478 Mitsikitsiky foana toy ny zaza feno lovia : homam-be vao mivanika . [Veyrières 1913 #1526]
Mitsikitsiky ohatra ny zaza feno vilia : homana be vao mivanika . [Rinara 1974]
Mitsikitsiky , toy ny zaza feno lovia : homana be vao mivanika . [Cousins 1871]
Proverb 4526 Mizenjena foana hoatry ny lakan' Imozevo . [Veyrières 1913 #3946]
Mizenjena foana, ohatra ny lakan’ Imozevo . [Cousins 1871]
Mizenjena foana tahaka ny lakan' Imozevo . [Rinara 1974 #2533]
Proverb 4726 Nahoana no dia sahisahy foana tahaka ny voalavo , ka tranom- -pahavalo no ivelomana ? [Rinara 1974]
Nahoana no dia sahisahy hoatry ny voalavo ka tranom- -pahavalo no ivelomana ? [Veyrières 1913 #6313]
Nahoana no dia sahisahy , ohatra ny voalavo , ka tranom- -pahavalo no ivelomana ? [Cousins 1871]
Proverb 4899 Ny ambany no tsy zaka , fa raha mby an-koditra mora foana . [Veyrières 1913 #2643]
Proverb 5367 Ny mihambo mora , fa ny manana tsy efa foana . [Rinara 1974 #3146]
Proverb 5547 Ny tarehy no tsy azo ovana , fa ny toetra mora ovana . [Rinara 1974 #3269]
Ny tarehy ratsy no tsy azo ovana , fa ny fanahy ratsy azo ovana . [Veyrières 1913 #3053, Rajemisa 1985]
Ny tarehy ratsy no tsy azo ovana , fa raha ny fanahy mora foana . [Veyrières 1913 #3053]
Proverb 5729 Ny volo : ahandroina , tsy masaka ; atono , levona . [Veyrières 1913 #4559]
Ny volo : ahandroina tsy masaka , atono mora foana . [Rinara 1974 #3369]
Ny volo : andrahoina , tsy masaka ; atono , levona . [Cousins 1871 #2492]
Proverb 5941 Piapiaka foana ny an' ny an-dambamena , fa ny an-jabo ihany no ho faty manao azy. [Rinara 1974 #3492]
Piapiaka foana no any ny an-dambamena , fa ny an-jabo ihany no ho faty hanao azy. [Cousins 1871]
Proverb 5995 Rafozana avy lavitra : tsy rotorotoina , tsy avela foana . [Veyrières 1913 #1468, Rinara 1974 #231, Cousins 1871 #2630]
Proverb 6000 Rafozana vao hita, ka tsy iorioriana , tsy hivakian-tratra ; kanefa tsy efa foana. [Cousins 1871 #2631, Veyrières 1913]
Proverb 6172 Raha tsy afa-bintana , mianjera foana tahaky ny tany mikororosy . [Veyrières 1913 #104]
Proverb 6589 Sinibe feno rano : fitopatopany foana , fa ny ranomaso havozona . [Rinara 1974 #3895]
Sinibe feno rano : fitopatopany foana , fa ny ranomaso koa havozona . [Veyrières 1913 #2747, Houlder 1895]
Proverb 7134 Toy ny kitapo afaka entana , ka tsy tsaroan' ny olona intsony. [Houlder 1895]
Proverb 7658 Tsy mety raha manao dihin-dRazihizihy : sady tsy hirebika no tsy hanimpy sandry , fa mihoninkonina an-toerana fotsiny. [Rinara 1974 #4614]
Tsy mety raha manao dihin-dRazihizihy : sady tsy hirebika no tsy hanipy sandry , fa eo no mihoninkonina foana eo. [Veyrières 1913 #2123, Cousins 1871 #3435]
Proverb 7687 Tsy mety raha ny lehilahy lehibe misiotsioka foana , nefa tsy mety raha very sioka . [Veyrières 1913 #1736, Houlder 1895]
Proverb 7936 Tsora-kazo noladinim-bitsika : lofidofiny foana fa ny tenany be dia marazoka . [Veyrières 1913 #3221, Cousins 1871]
Tsorakazo noladinim-bitsika : lofidofiny foana , fa ny tenany be efa haroka . [Rinara 1974 #4473]
Tsorakazo noladinim-bitsika : lofidofiny foana, ra ny tenany be efa marazoka . [Houlder 1895]
Proverb 8188 Vidian-tsy azo, ka alai-mora foana . [Rinara 1974 #4948]
Proverb 8412 Zatovo rovi- -damba , isak' izay mifanena amin' olona miraoka ny ahitra ihany. [Rinara 1974 #5081]